Xaaska Madaxweynihii Booliska Adduunka Ee Interpol Oo Carruurteeda La Baxsaneysa – somalilandtoday.com
Xaaska Madaxweynihii Booliska Adduunka Ee Interpol Oo Carruurteeda La Baxsaneysa
(SLT-Japan)-Haweeneyda u dhaxday madaxweynihii booliska adduunka ee Interpol, Meng Hongwei, oo tan iyo bishii Sitembar ku xidhan dalka Shiinaha, ayaa magangalyo siyaasadeed ka dalbatay waddanka Faransiiska, si loo sugo amniga iyada iyo labadeeda carruurta ah, oo mataano ah.
Grace Meng iyo mataaneheeda oo 7 jir ah ayaa hadda ku nool magaalada Lyon, oo ay ku taallo xarunta dhexe ee booliska adduunka.
Meng Hongwei ayaa war iyo wacaalba laga waayay xilli uu booqanayay waddanka Shiinaha.
Bishii Oktobar ayey mas’uuliyiinta dalka Shiinaha sheegeen in Mr Meng lagu wado baadhitaanno ku saabsan laaluush-qaadasho lagu tuhmay.
Xaaskisa iyo carruurtiisa ayaa hadda ku jira gacanta booliska, kuwaasoo amnigooda sugaya ka dib markii loogu hanjabay in la dilayo.
Idaacadda France Inter, shalay Jimce ahayd wareysatay ayaa sheegtay iney tidhi, “Waxaan ka baqayaa iney i afduubtaan”.
“Waxaa taleefanno iga soo wacay dad aanan garaneyn. Xitaa gaarigeyga waa la waxyeelleeyay. Labo qof oo shiineys ah, nin iyo haweeney, ayaa i daba socday ilaa inta aan hoteelka ka imaanayay”, ayey tiri.
Xilliga ay wareysiyada la yeelanayeen warbaahinta ayey diidday iney wajigeeda muujiso, iyadoo amnigeeda u baqeysay.
Maalintii seygeeda la waayay, waxay sheegtay inuu barta xiriirka bulshada ugu soo qoray farriin uu ku leeyahay “I sug int aan kusoo wacayo”, markii dambena wuxuu u soo diray sawir mindi ah oo muujinaya inuu khatar ku jiro.
Maxaa laga ogyahay xaaladda Meng Hongwei?
Tan iyo markii warkiisa la waayay 25-kii bishii Sitembar, ma jirin wax macluumaad ah oo laga helay xaaladda uu xabsiga dhexdiisa ku wajahayo ama xitaa dacwadaha lagu soo oogay.
65 jirkan ayaa shaqadiisa ahayd inuu madax u yahay booliska adduunka waxay ku saabsaneyd inuu caalamka oo idil u dhexeeyo, mana uusan ku khasbaneyn inuu wakhti kasta ku laabto shiinaha.
Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa 6 ruux oo wasiir ku xigeenno awood badan ka soo noqday wasaaradda amniga qaranka ee dalka Shiinaha, isagoo khibrad 40 sano ahna u lahaa hannaanka caddaaladda dambiyada ee waddankaas.
Meng Hongwei waxaa madaxweynaha booliska adduunka ee Interpol loo doortay bishii Nofembar ee sannadkii 2016-kii, wuxuuna noqday qofkii ugu horreeyay ee u dhashay Shiinaha oo xilkaas loo dhiibay, qorshuihuna wuxuu ahaa inuu shaqada wado ilaa sannadka 2020-ka.
Dowladda Shiinaha ayaan wax caddeymo ah ku soo bandhigin eedeymaha loo heysto Mr Meng.
Xaaskiisa Waxay iyadu aaminsan tahay in aanu nooleyn.
Sidey Interpol uga jawaabtay xarigiisa?
Shiinaha ayaa sheegay in Mr Meng uu warqad iscasilaad ah u qoray xog hayaha guud ee Interpol Jürgen Stock, kaasoo isagana sheegay inuu warqaddaas helay 7-dii bishii October.
“Ma jirin wax sabab ah oo aan uga shakiyo in wax la khasbay ama ay si khalad ah ku dhaceen” ayuu yiri xog hayaha guud.
Wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xigatay Mr Stock ayaa sheegtay inuu hoosta ka xariiqay in xeerarka Interpol uusan u oggolaaneyn inuu baaritaan ku sameeyo sababta uu u maqan yahay Mr Meng.
Maamulka Interpol ayaa aqbalay iscasilaadda iyagoo aan wax faahfaahin dheeraad ahna bixin.
Bishii Nofembar ayey Interpol madaxweyneheeda cusub u dooratay nin u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Kim Jong-yang, waxayna ku gacan seyreen iney doortaan musharax u dhashay dalka Ruushka.
Maxay tahay Interpol?
Hay’adda booliska caalamiga ah ee dambiya adduunka ayaa magaalada Vienna ee dalka Austria lagu aasaasay sannadkii 1923-kii, waddamadii ugu horreeyay ee xubnaha ka ahaana waxaa ka mid ahaa Jarmalka, Faransiiska iyo Shiinaha.
Dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa goor dambe ku biiray.
Sannadkii 1956-kii ayuu si rasmi ah magaceeda u noqday Interpol waxaana markaas ka dib xubno ka noqday ilaa 194 waddan.
Ujeeddada ugu weyn ee Interpol waa iney wada shaqeyn la yeeshaan macluumaadkana la wadaagaan booliska dhammaan dalalka xubnaha ka ah.